एक मृ’तकले यसरी व्यापकरुपमा फैलाए को’रोना, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा धमाधम देखिदै गर्दा १५ दिन क’डा ल’कडाउन गर्न माग ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/एक मृ’तकले यसरी व्यापकरुपमा फैलाए को’रोना, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा धमाधम देखिदै गर्दा १५ दिन क’डा ल’कडाउन गर्न माग !
सप्तरी। को’रोना सं’क्रमणका कारण मृ’त्यु भएका सप्तरीका एक वृद्धले व्यापकरुपमा को’रोना फैलाएको देखिएको छ । हालसम्म उनीसँग सम्पर्कमा आएका ९ जनामा को’रोना सं’क्रमण देखिइसकेको छ । राजविराज नगरपालिका–६ का उनी भारतमा उपचार गराई श्रीमती र छोरासहित नेपाल आएका थिए।
मुटु रो’ग, थाइरराइडलगायतका दीर्घरो’गीसमेत रहेका उनीलाई स्वास प्रश्वासमा स’मस्या हुनुकासाथै ज्व’रो पनि आएपछि धरानको बीपी प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगिएको थियो । पीसीआर परीक्षण गर्दा को’रोना सं’क्रमण देखिएका उनको उपचारकै क्रममा साउन १ गते राति अस्पतालमै मृ’त्यु भयो।
साउन १ गते : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत ७३ वर्षीय को’रोना सं’क्रमितको मृ’त्यु।
साउन ४ गते : मृ’तक पुरुषको परिवारका ५ जनामा को’रोना सं’क्रमण रहेको पुष्टि । उनकी श्रीमती श्रीमती(६७ वर्ष), छोरा(४५), बुहारी३६), नाती(१७), नातिनी(११) मा को’रोना सं’क्रमण रहेको पुष्टि।
साउन ५ गते : मृ’तकको घरमा थापिएको खाद्य तथा ग्याँस पसलमा काम गर्ने ५५ वर्षीय पुरुष र मृ’तकका छोराका साथी ३७ वर्षीय पुरुषमा को’रोना सं’क्रमण रहेको पुष्टि।
साउन ६ गते : मृ’तका छिमेकी ५३ वर्षीय पुरुष र उनकी ४८ वर्षीया श्रीमतीलाई को’रोना सं’क्रमणको पुष्टि।
आज को’रोना सं’क्रमणको पुष्टि भएका पुरुष र महिलाकी छोरी राजविराजमा रहेको सनराइज बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी हुन् । उनीमार्फत बैंकमा पनि को’रोना सं’क्रमण फैलिएको हुनेसक्ने आशंका गरी बैंकलाई सिल गरिएको छ।
सं’क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा लगातार को’रोना सं’क्रमित देखिन थालेपछि अहिले राजविराजका स्थानीयमा त्रा’स छाएको छ। उनीहरुले कम्तिमा पनि १५ दिन क’डा लकडाउन गर्न प्रशासनसमक्ष माग गरेका छन् । नगरपालिकाले भोलीबाट सम्पूर्ण पसल तथा व्यवसाय बन्द गर्न उर्दी जारी गरेको छ। अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कने भनेको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका अनुसार मृ’तक र उनीपछि को’रोना सं’क्रमण देखिएकोको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा १५० जनाभन्दा बढीको स्वाब संकलन गरिसकिएको छ । आज सं’क्रमण देखिएकाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी स्वाब संकलनको तयारी भइरहेको छ।
बाबु गुमाएपछि आदर्श मिश्रको ओलीलाई चुनौती : मेरो बाबाले चलाएको स्कुल हेर र तिमीले चलाएको देश